အစ္စလာမ့်ဗိသုကာ - ဝီကီပီးဒီးယား
မက္စ်ဂျိေဒရှားဟ်၊ Isfahan၊ ၁၈၄၁ခု]။ ပန်းချီ Xavier Pascal Coste.
အတွင်းဝင်း ၏နန်းတော် Alhambra အတွက် Granada၊စသည်တို့ကို။ ၊စပိန်။
မင္ကြင္း၏အတွင်းပိုင်း အလွန်ကြီးစွာသော၏kairouan သာ ရွား။
ဗိသုကာအစြန္း အကြီးမြတ်ဆုံးသောအရုပ်များပေါ်ပေါက်လာ၏အနုပညာအတွက်ပိန္ပိန္ပစ္စည်းစဉ်းစားသည်။ ဝေါဟာရများအတွက်သမိုင်းဝင်ဗိသုကာ၊အနုပညာအဖွဲ့အစည်းက၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်သဘောတရားများအစ္စလာမ့်သဟဇာတ)။ ကိုယ်၏အမြတ္စကြိုဆို။ အစ္စလာမ့်ဗိသုကာတစ်ဦးအဖြစ်အများဆုံးအောင်မြင်သောနည်းလမ်းများ၏ ဗိသုကာ၊ ဗိသုသမိုင်းကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု။ တစ်ချက်မှာ၊လွှမ်းခြုံနိုင် پیوستاری တန်ဖိုးရှိသောနှင့်တက်ကြွအတွက်အထိမ်းအမှတ်အစ္စလာမ့်အသိအမှတ်ပြုသောအစပျိုးအားလုံးသည်ထိုသူတို့၏အမျိုးအစားယူနစ်ခေါင်းစဉ်အစ္စလာမ့်ဗိသုလာမယ့်အသီးအသီးအခြားလဲ။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
၈ ဗိသု၊ိုင္ငံမ်ား၊အာရဗစ္မှပဉ္စမမြောက်ရာစုနှစ်တွင်သတ္တမ Hijri
၁၆ ဗိသု၊ိုင္ငံမ်ား၊အာရဗစ္မှပဉ္စမမြောက်ရာစုနှစ်တွင်သတ္တမ Hijri
ဗိ။။။အလမ်းများ၏ ဗိသုကာ သည်အလွှမ်းမိုးခြင်းအားဖြင့်အစ္စလာမ့်ယဉ်ကျေးမှုပေါ်ပေါက်လာ၊နှင့်အနည်းငယ်အတပ်ဆင်ထားသည်: အစြန္းေရာက္:
တူညီသောမျိုးစိတ်အမည်အပေါ်ဝင်၊ဒီအအများ၏မျိုးစိတ်များ၊ပါရှိသည်ဗိသုထောက်ပံ့ပေးရန် ကမ္ဘာ့ အကြောင်း၊အဖြစ် ကမ္ဘာ့ အသိ။ အသွင်အပြင်ဤနိုင်ငံ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာအတွေးအခေါ်များ၏ အစ္စလာမ် အတွင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်၊တည်ရှိ၊ကြောင့်၏၊အချို့အင်္ဂါအတွက်ဘုံ။
အတွက်မျက်နှာကြက်၏အရပ်၊အမြတ္စပါဝင်သည်:အိန္ဒိယ၊စသည်တို့ကို။ အဝန်း။၊ ထိုနိုင်ငံများ ၏အာရှအလယ်ပိုင်း နှင့် ကေးဆပ်၊စသည်တို့ကို။ အီရန္၊စသည်တို့ကို။ ေမြးေ။၊ ထို ကြက်ဆင်၊စသည်တို့ကို။ ၊ဆီးရီးယားနှင့်။ လက်စတိုင်း၊စသည်တို့ကို။ အဲဂုတ္တုပြည်နှင့် နီးရွား၊စသည်တို့ကို။ ၊အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊စသည်တို့ကို။ ဘာသာျပန္ခ်က္ (Maghreb)၊အပျော်၊။
ထိုမြတ်စွာဘုရား၏အချိန်၊အစြန္းနိုင်မှအစောပိုင်းနှစ်များ၏အထွန်းအစ္စလာမ်မှတက်နှင့်အထွာဗီဒီယိုများ၊ခေတ်သစ်ဗိသုသူကေျပာပါတယ္။ သို့သော်၊ဤမအ گسترگی နှင့်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကူးအပြောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ဗိသုကာ၊ဒေသအားလုံး၌တူညီခဲ့သည္။ ဥပမာ၊"ထိုကဲ့သို့သောအခန်းကဏ္ဍဂုတ္တုပြည်၌"အနှစ် ۹۲۵(လ) တည်ရှိမှုသို့ကြွလာတော်။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
အစ္စလာမ့်အနုပညာနီးပါးတိုင်းပြည်အပေါ်စီးရီး၊ "အနက်" နှစ်တစ်နှစ်အတွက် ۴۱။ Reddit နှင့်ပြောင်းရွှေ့ကြေး၏အဆိုပါဓာတ်နှင့်အနက်အထြက္ရွိမြို့မှ၊စသည်တို့ကို။ ထွက်လာ။ ဒီလႊဲေျပာင္း၊အနုပညာပေါင်းစပ်မှုကအနုပညာမြေများ၊အထူးသဖြင့်အီခဲ့သည်။
အီရန်နှင့်အာရှအလယ်ပိုင်း၊စသည်တို့ကို။ အချိန်ကျော်။ အတွင်း။၊ အ ghaznavid၊ghōriyān များအတွက်ရှာပုံတော်အတွက်ဒသမရာစုနှင့်အနုပညာသည်အရေးပါသောဒြပ်စင်၏။ ကြီးမားတဲ့မြို့များကို၊စသည်တို့ကို။ တည်ဆောက်လျက်ရှိ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် nishapur နှင့်က်ဲဟ္လြန္မ္(အာဖဂန်နစ္စ)၊နှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသော၏Isfahan(အရာဆက်လက်လိမ့်မည်ပေမယ့်၊အကိုက်နှင့်တင်၊ကျော်အများအပြားရာစုနှစ်)။ ဗိသုကာ၊သင်္ချိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မြးမြို့။
သာပြီးနောက်သိမ်းပိုက်၊နှင့်အကျွမ်းများ၏အရပ်နှင့်အတူယဉ်ကျေးမှု၊ႏွမ၊ခဲ့ကြောင်းအမန္လမ္း၊ေခတ္မီဗိသုကာနှင့်၊အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊"အဗိသုကာ၊"ဤမော်တာ။ ထိုကဲ့သို့သောအခြားအားဖြင့်ထို"ဗိသုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏၊"အလုပ်၊"သူတို့ပထမဦးဆုံးမျိုးစေ့များရဲ့"အစ္စလာမ့်ဗိသုကာ"အတွက်သူတို့ရဲ့မြေ میافشاندند။ အဆိုနှင့်အတူဥပဒေများဖြစ်၏တားမြစ်ချက်၏နန်းတော်တွင်အစ္စလာမ်၊အပြစ် aristocratic၊စိန္ပန္း၊စသည်တို့ကို။ အပြစ်ခေါင်းဆောင်များအစ္စလာမ့်အဝန်းအလူ၊စသည်တို့ကို။ နှင့်အတူကနှိုင်းယှဉ်အတွက်ဘုံအားလုံးကာလ၏caliphs အမ်ိဳး ازخلیفه တတိယ၊ရှမ်း၊အစိုးရ၊အစား၊ဤမှတ်ချက်ကြောင်းပြသသိုလှောင်မှု(ကြောင့်၏မြင့်အောင်)အားလုံးအတွက်အသက်အရွယ်၏လယ်ပြင်တွင်အစ္စလာမ့်ဗိသုကာ၊ပျော်၊တစ္ကမာၻ၊သင်အမှန်တကယ်လိုချင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဘာသာရေးကိုသူတို့၊ကြည့်ရှု၊စသည်တို့ကို။ အဆောက်အအုံများ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် قصرالحمراء စပိန်အတွက်၊နန်းတော် اخیضر မှာညစာစားအားလုံး دارالخلافهها အ نبایست အတွက်၊ဘာသာရေးနှင့်တာ္။ သို့သော်၊တစ်ဦးချင်းစီ၏ဤအထိမ်းအမှတ်၊အထင်ကရသင်္ကေတများ၏အနုပညာနှင့်ထူးချွန်၏တာ္၏ဗိသုကာရောမအင်ပါယာ၊အလာ;နှင့်ဤဖြစ်ပါသည်၊ကျနော်တို့ရှိသည်သော"အစ္စလာမ့်ဗိသုကာ"ပေမဲ့မဖြည့်ဆည်း"ဗိသုလွတ်လပ်သော"ကျွန်တော်တို့အနိုင်အဖြစ်ရာသီ الختام ဒီဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ဟုယူဆနေကြသည်(ရိုးသား rashidi လူ-သတင်းစာကူျ ۴ ဇွန်လ ၁၃၉၄)။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name အတွက်အောက်ပါဇယားမှစုံစမ်းစစ်ဆေးအ congruity နှစ်ဦး၏စကား"ဗိသုကာ"နှင့်"အစ္စလာမ်"၊ငါတို့သည်သင်တို့လိမ့်မည်အဘယ်အရာကိုမြင်လက္ပတ္နာရှိ(ရိုးသား၊rashidi လူ-သတင္းကူျ ۲۳ خرداد ၁၃၉၄)။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
ထာင္ေဖြစ်ဆိုလိုတယ်(အားဖွငျ့အ prophethood၏သန့်ရှင်းသောမန်(အလ္ဂဒီးရ္)) င္ပါကေထာင့္မွန္က်ေနစုဆောင်းနှင့်မော်တာသည်သမိုင်း
နေရာတိုင်းမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ရှင်၊စသည်တို့ကို။ ကိုက်နှင့်အတူရာသီဥတု၊ယဉ်ကျေးမှု၊ပထဝီ
ဒါဟာတည်ထောင်ရန်ရည်ရွယ်သည်'ကိုကျင့်ဝတ်နှင့်ကိုက် داشتههای လူဘာသာ ဒါကြောင့်ရည်ရွယ်ဖန်တီးအမိုးအကာပထမနေရာအတွက်၊ပြီးတော့အရည်ကိုင်ရည်နှင့်အလှအပ
အကြား၌အမြို့မြို့။ မြို့နှင့်ဆာ္၊အရာအတွက်အစောပိုင်းရာစုနှစ်၏အ hegira အတွက်လက်ရှိကမ္ဘာနှင့်အ Abbasid၏ဗဟိုအာဏာရှိကြ၏နှင့်အတူကျဆုံးအ Abbasid ဓာတ်မှစက်ဝိုင်း၏တန်ခိုးထွက်ခဲ့ကြပြီးအဆိုပါအထိမ်းအမှတ်ဗိသုကာနှင့်မြို့ပြအဆောက်အဦလက်ဝဲမှအစောပိုင်းရာစုနှစ်ကြော်ငြာအဖြစ်အထွတ်အထိပ်အပင်ကို၏ အနုပညာ နှင့်အစ္စလာမ့်ဗိသုကာ၊ဤမြေများ၊အချိန်ကာလအတွင်းဆွေးနွေးနေ ماندو အတွက်သင်တန်းများအပါအဝင်၊ဟိန္ဒူ၊ကကျူးကျော်အမှန်တကယ်ခဲ့သည်။ ဤစစ်အတွက်နှစ်ပေါင်း اتی အောက်စိုး၏အတည်ရှိပြီး၊အသုံးနှင့်အတူ၊သင်သည်သင်၏ပုံစံကို၊အနုပညာ၊ပေ درآمیختند။ (ထိန်။ မက် ایودی၊စသည်တို့ကို။ ۱۳۶۷)ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
တွင်မြောက်အာဖရိက၊အနိမိတ်၏အနောက်ဘက်စာမျက်နှာ(တည်ရှိ၏နယ်နိမိတ်ပေါ်မှာခရစ်ယာန်နိုင်ငံ)တစ်အချို့ပုံစံတွင်အစ္စလာမ့်ဗိသုကာ၊အထူးသဖြင့်မန္လမ္း၊ထိုပြည်ကိုအုပ်စိုးသောနှစ်ပေါင်းများစွာခဲ့ပြီမြားနှင့်ကတည်းကပြောင်းရွှေ့ကြေးများအတွက်မြေယာ၊အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်၏ارامتری။ ရီေကွေးအီပါဝင်သော لشکرکشیها နှင့် ویرانیها နှင့် بازسازیهای လျင်။ မဟုတ္ဘူး။ ထိုကွောငျ့၊ဗိသုကာနှင့် urbanism၊တိုးတက်မှုနှုန်းကွေး၊ဆိတ်ငြိမ်မှုမရှိဆိုင်းလိုက်စဉ်အတွင်းဖြစ်ရပ်များ။ အချိန် fatimids နှင့် ایوبیان စိုးစံ၏အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမြောက်အာဖရိက شبستانهای ကော်လံ၊ကျောက်ခေတ်နှင့်အတူအစီအစဉ်များအတွက်စတုရန်းပုံသဏ္ဌာန်၊ဝိသေသအဓိက Horseshoe ပုံနှင့်ပုကျောက်ခေတ်)။ (ထိန်။ Halen။ ۱۳۸۳၊အ ۸۴ နှင့် ۹۲၊۹۳)
ပြီးနောက် ایوبیان၏ကာလအတွက်ဆရာဝန်သွား ဂုတ္တု။၊ နိုင်ငံရေးစနစ်အပေါ်မူတည်ချို့သောအီဂျစ်အုပ်စိုး။ သာ نظان مملوکی သောအရပ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ကျေးကျွန်အပေါ်ပြည်အီဂ်စ္၊"စသည်တို့ကို။၊ စူ၏بردههایی သာေျအခြေခံမူများ၏ပညာရေးနှင့်စစ်ရေးအစေခံရန် نجبای တန်းညီကိုလက္ခံခဲ့တယ္။ ကတည်းကအပစ္စည်းဥစ္စာ၏အနောက်သူ့အဖို့ accrued ထိန်းသိမ်းရေး၊ဒီအတွေအများကြီးဆရာဝန်သွားဖို့ကိုအမျိုး၏ဗိသုတက်လှည့်မှအကြွင်းအကျန်ကိုသူတို့၏စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်သေချာစေရန်။ အပေါ်အခြေခံ jurisprudence ငွေနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ၊အများအတွက်အခြေခံအကျဆုံးသမ္မာကျမ်းစာမှတတ်သွင်းခဲ့ကြ(လှု)confiscation၏ခုခံနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊အများအပြားဆရာဝန်သွားဖို့တည်ထောင်၏အမြစ်နှင့်အဆက်မိမိတို့၏قیمان နှင့်လုပ်ခလစာများအလုပ်ရှာဖွေရေး၊مؤسسهها ခဲ့ကြသည်။ အမြစ်ႈဘာသာရေးတွင်သင်္ချိုင်းမူလေနရာ၊ဂုဏ္ေ၊ဆေးရုံ၊။။။بودندکه သူတို့ကိုငါအပါအဝင်ရှုပ်ထွေးသောရှိနိုင်ပါသည် قلاوون။ (ထိန်။ ရုပ်ဆောင်،۱۳۸۱،۸۵)
အစ္စလာမ့်ဗိသုကာေ ဖၚျ Mahal
مارتن ကျောင်း၊ငါး၏အမှုအတွက်ဗိသုကာပညာနှင့် အစ္စလာမ့်အနုပညာ برمیشمرد:
ကျောင်း၏Maghreb ပါဝင်သည် ရွား၊စသည်တို့ကို။ ၊အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊စသည်တို့ကို။ ၊မော်ရို နှင့် စပိန်။
ကျောင်းလိင် င္သည္။ အီ။။။ အီရတ်၊စသည်တို့ကို။ အာရှ၊အရှေ့အာရှ၊အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၊စသည်တို့ကို။ ၊ဂန်နစ္စတန် နှင့် ပါကစ္စ။
ကျောင်းလွှတ် ပါဝင်သည် ကြက်ဆင် နှင့် ကြောင်းတူသံကွဲ။
ဘာမှမနှင့်အတူမှားကြောင်းအချို့သောအသွင်အပြင်အစ္စလာမ့်မဝင်ရ။ ဒါဟာဒီအမျိုးအစားများ၊လုပ်ဆောင်ချက်များရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ငြိမ်ဖို့အလမ်းအပေါ်လွင်ထင်ရှားပါဘူး၍နေစဉ်တွင်အစ္စလာမ့်ဗိသုကာ၊"ငြိမ်"၏အသွင်အပြင်နှင့်ည့္ခရှိနေပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊အတွက်ခုံး၊arabesques၊carvings ရိုး၏မျက်နှာစာနှင့် کندویی ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်တေ بریهای အလှဆင်ဤအဆောက်အအုံ။ ငါတို့မြင်အားလုံးဤဒြပ်စင်အလက်အကြောင်း၊ပြည်နယ်၏""နှင့်"ကျောက်မျက်"ပြသဖို့အားတက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌စတိုင်နှင့်ပွင့်လင်းရောက်ရှိ။
ဘာအကူးအပြောင်းသည်အဟောင်းကနေအသစ်ဖြစ်ပွား။ အ။ နှိုင်းယှဉ် چهارتاقی ကျိန် (Sassanid ခေတ်)၊အမိုးခုံးပေါ်တွင်အမြစ်၏အထူ၊ကျိန်းဝပ်မြို့နှင့်အ ဂုဏ္ေ Abbasi၊Isfahan၊၊ကောင်းတစ်ဦးအထောက်အထား၏ဤအချိန်ကျော်ဖြည်းဖြည်းချင်း၊ဗိသုကာအဖုံးကိုဝိုင်းဖို့နည်းလမ်းတွေရှာနေစတိုင်တက်။ နည်းလမ်းများတယောက်နဲ့စတိုင်အများသိုလှောင်မှု၏နှုတ်ကြီးနှင့်အမိုးခုံးများ၊စသည်တို့ကို။ ပြောင်းလဲဖို့ထပ်စက်ဝိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးကျန်အဥပမာတစ်ခု၏အနိုင်အမိုးခုံးအခြားစကားများတွင် jame၏Isfahan(အရွေးခံကာလ)။ အင်္ဂါင်း၏ဗိသုကာအီရန်အတွက်ခေတ်ပြိုင်အကျယ်။ ခေတ်ဗိသုကာနှင့်အတူထိန်းသိမ်းခြင်း၏အင်္ဂါရပ်များအပင်စည်၏ဦးတည်ချက်အတွက်စိတ္တ၏အၾကာကသွားလေ၏။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် အ၏သင်္ချိုင်းဂူရီ-အလီဝီေ (၁၃၆၇ Ah။sh)နမူနာအကျယ်အမိုးခုံး Qaboos ဘင်မီ(၃၇၅။<ဆိုဒ္လိပ္စာ>#)။ ကစားစရာများအတွက်ခေတ်ပြိုင်သာ၏ဗိသုကာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအပြင်ဘက်တွင်အီရန်၊လွန်း၊ကိုမြင်လျှင်နေကြတယ်။
ဖန်ဆင်းခြင်းတွင်၏ပုံစံ၊အမွားမ်ား၊အစည်းအဝေးခန်းမ၌အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Isfahan အရာဖြစ်၏ထင္ရွားေသာေခတ္မီဗိသုကာ၊အီ-အစ္စလာမ့်မည်၊အမိုးခုံးတစ်ဦးသင်္ကေတအဖြစ်ဓာတ်၏ဗိသုကာႏွလှုံ့ဆော်ခေါ်ဆောင်သွားသည်၊လမ်းဖြင့်၊ထိုဦးတည်ချက်များနေရာချထားအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်စင်တာ၊အဆင္အျနှင့်အတူပုံစံအစည်းအဝေးခန်းမဆှဖှေဲ့။ အမိုးခုံးပေါ်တွင်အခြေစိုက်စခန်း၏စတုရန်းပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းစတုရန်းစက်ဝိုင်းကိုသုံးပြီးအမျိုးမှုတ်သွင်းခုံး၊ကႏုတ္ဒီအတွက်နှင့်အတူလိုက်နာမှုနိယာမ၏အကျယ်အဆိုအရအဆိုပါမြို့။ သာ morphing၊ဖတ်ရန်ကြိုးစားပါ၊အကြောင်းအမျိူးတုံး၊ဖတ်တယ္။ အဆိုပါေက်ာ္ေqibla ဦးတည်ချက်လှည့်၊နှင့်ဖတ်၊လေး ၊ဖက် ရာမှဗိသုဒြပ်စင်အသဲကန္တာရရှိရံမြို့။ လည်း၊ဤအင်္ဂါတြက္အာစိုက္စဂုဏ္ေ tdayknndh ဗိ&rsquo;ဗီဒီယို၊Isfahan၊ထိုကဲ့သို့သောဖြစ် ၏နန်းတော် hasht behesht ။
လေ့လာမှုအကြောင်းအသွင်အပြင်အီကိုယ်စားပြုဘယ်လိုဖြန့်၊အတွင်းတဆယ်ရာစုနှစ်အတိတ်။ တစ်ခုချင်းစီကာလ၊အဆောက်အအုံနှင့်အတူဂုဏ်သတ္တိများအတွက်ကျေးရွာနှင့်။ အမြို့မြို့၊လမ်းတွေ၊ယာဉ်စသည်တို့ကို။ ထိုသဲကန္တာရ၏။ ပင်လယ်၊တောင်နှင့်ကမ်းရိုးတန်းမြို့ကြီးများတည်ထောင်ခဲ့သောအမျိုးမျိုးရှိသည်။
အရေးပါ၏အစ္စလာမ့်ဗိသုကာ၊အခါသိသာပါတယ္။ သိသာ ساختههای ဒီအသင်တန်းအမှတ်စဉ်အပလီကေးရှင်းအရုပ်ပစ္စည်းနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာအဆောက်အဦး-အကြောင်း၏အရေးအပါဆုံးအင်္ဂါရပ်များ၏အကြောင်းသည်အများ၏အာရုံကိုမြို့ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အရေးပါ၏ဤအင်္ဂါရပ်ကိုပျံ့နှံ့၏၊ထိုက်သည်များ၏အထိမ်းအမှတ်အစ္စလာမ့်ခေတ်၊နှင့်၎င်းတို့၏လျှောက်လွှာအတွက်လက္ခဏာ။
တစ်ဦး)ဘာသာရေးအထိမ်း။ ပါဝင်သည်မန္လမ္း၊آرامگاهها၊ကျောင်းများ၊စသည်တို့ကို။ حسینیهها၊စသည်တို့ကို။ تکایا၊مصلیها။
ခ)အထိမ်းသာေရး။ ပါဝင်သည်တံတား၊စသည်တို့ကို။ palaces။၊ အ caravanserais၊စသည်တို့ကို။ ဗတ်၊စသည်တို့ကို။ ဈေးကွက်များ၊စသည်တို့ကို။ castleand ရေလှောင်။
ဤအုပ်စုနှစ်စုအထိမ်းအကာလ၏။။။တစ်နေရာမှ ရှိခိုးကြီးမားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နှင့်အ နေ ရှိပါတယ်။
အအာရုံစူးစိုက်အပေါ်ဖြစ်ခဲ့ မႈ။၊ ထို သင်္ချိုင်းဂူများ၊စသည်တို့ကို။ ေက်ာင္း။၊ အ နန္း၊စသည်တို့ကို။ ၊အင်း၊ အဖန်လုပ်လုပ်အတွက်ထိုအရာသည်မြတ်စွာဘုရား၏အမြတ္စ။
ဆောက်လုပ်ရေး၏palaces အတွက်အီရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့သောအလွန်ဝေးကုန်၏။ အယူအဆကို၏ခေတ်နှင့်အတူအမျိုးအယူအဆဤစကားလုံးများ၏အတိတ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အတိတ်အတွက်၊အဆောက်အအုံတစ်ခုတည်းအမျိုး၏ဗိသုကာသည်ဝန်ကြီးချုပ်၏دیگربناها ဆောက်လုပ်ခဲ့သောအများအပြား။။။၊ဥပမာအားဖြင့်၊မည်ကဲ့သို့ရှည်လျားသည်ဗိမာန်တော်နှင့် نیایشگاه နှင့်ကျပန်းအရပ်၊ရဲတိုက်ကာကွယ်ရေးနှင့်၊နောက်ဆုံးတော့၊အများအတွက်နေအိမ်သို့များစစ်ရေးအသင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်(*)။ တဖြည်းဖြည်း၏သဘောသဘာဝကိုဤအဆောက်အဦးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်နှင့်အ palaces သို့မဟုတ်အတွက်အအီ၊အအုပ်ချုပ်၏ဒုတ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊အချိန်အ Achaemenid၊persepolis၊အချိန်အတွက်အ Parthian၏နန်းတော် Ashur၊အချိန်အ Sassanid ယာ tisfoon၊ငွေပြနှင့် sarvestan နိုင်မည်။ တွင်အစ္စလာမ့်ခေတ်ဤအဆောက်အတဖြည်းဖြည်းများအတွက်ကျိန်းဝပ်နှင့်အစိုးရရေးရာအသုံးပြုခဲ့သည်။
အထွန်း၏အာေ၊နန္းသို့မဟုတ်ယိုနှင့်အတူဘုန်းအသသောအတိုင်းအရည္အေ။ အစား نماندهاست။ ထုံးစံများ၏ဗိသုကာနန္းေالعمره နှင့်နန်းတော် المشتی-အကြောင်းမှာထိုအချိန်ကာလ၏အနက်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအကြွင်းအကျန်ကြောင့်နေဆဲသိသာအနေဖြင့်အလေ့အကျင့်၏အနုပညာကျမ်း)၊အဆင်ပြေအောင်မြို့။
အချိန်၏Safavid၏ဆောက်လုပ်ရေး palaces ဝင်တော်မူပြီတစ်ဦးအဆင့်အသစ်မှာအခြေစိုက်စခန်း၏စားပွဲပေါ်မှာသူတို့ကိုသုံးဦး(تبریز၊qazvin၊Isfahan)နမူနာ၏။ ဂျူးလေးဆယ်စစ်၊ရှစ်ပရဒိသုနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ قاپوی၊Isfahan၊အီရန်၊မဂ် Abad၊အီဖင်၏Kashan နှင့် فرخآباد Sari၏အရေးအပါဆုံးနမူနာများ၏ထုံးစံ၊ညာဉ်လံ။ ဖန်တီး palaces ညီသောလမ်းအတွက်၊ညာဉ်၊Nadir(တူနန်းတော်၏အနေနိင်)qajar ကာလ(နန်းတော်မစ်ပန်းခြံနှင့် شمسالعماره)။ Palaces အတွက်အီရန်၊မြေပုံအမျိုးမျိုးတွဲ:ချို့ kushk တူရှိ(ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ရှစ်ကောင်းကင်ဘုံ၊ျမတ္ Abad)၊အချို့မြေပုံရင်ပြင်နှင့်စတုဂံ(ပုံ)။ အရေးကြီးဆုံးကိစ္စအတွက်အဆောက်အဦ palaces၊အထူးသဖြင့်အ Safavid ခေတ်နောက်၊စသည်တို့ကို။ မွမ်းမံနှင့်အတူကြွပ်များ၊စသည်တို့ကို။ molded။ အမှန်အလုပ်နှင့်ကျောက်ခေတ်။
တစ်ဦး၏အမြင်ဆန့်ကျင်ဘက် နှောင်းပိုင်း گچین
ဆောက်လုပ်ရေး၏အရိပ်နှင့်အတူအာရုံစိုက်လူမှုရေး၊စီးပွားရေး၊ဘာသာရေး၊ရှေးကာလ၌အီဖြစ်ကြ၏အထူးသဖြင့်အကျိုးစီးပွားကို)။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊အ caravanserais အားနှစ်ဦးအုပ်စုများလမ်းများနှင့်မြို့ပြအတွင်းသို့ခွဲခြားထားပါသည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နည်းလမ်းများ၏ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ဘုရားရှိဖြစ်ရတဲ့အတြဲတိုင်းပြည်အနှံ့ کاروانسراهایی ရပ်တန့်ရန်နှင့်ကျန်တစ်ခုမှာအပေါ်သို့။ ပထဝီတည်နေရာ၊နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးအတွက်အီရန်၏အကြောင်းတရားများတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဖြန့်၏အဆောက်အ)။ အတွက်အီရန်၊အကွာအဝေးတိုင်းလေးမိုင်(۲۶ ကီလိုမီတာ)အဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်၊ကျန်အဆိုအရအဆိုပါမြို့။ ဘုရားမှဘာသာရေးမြို့ကဲ့သို့ဆာ္ဒီဟဂ်္ဘုနှင့်သတင္း၊ဖူးစေဝင်း၊အများအပြားလမ်းကြောင်းအတွက် جادههایی အဲဒီမြို့အဆုံးသတ်။ ဆောက်လုပ်ခြင်း(၏ဦးတည်ချက်အတွက် Khorasan။"အနောက်ဘက်မှအရှေ့နှင့် kermanshah مشهد)။ ဒီဘက်ပါ၊အရေးပါသည့်ဆက်သွယ်ရေးကနေအနောက်ဘက်မှဘာသာရေးမြို့အရိပ္ေနှင့်ဂ်နှင့်အရှေ့ကနေအလႅာဟ္အ လီဘင်ပျက်ကွက်-Rida သာသနာျပဳနိပါတယ္။ လည်း၊အချိန် safavi များအတွက်ကောင်းစွာ-ဖြစ်ခြင်း၏အလက်၊စသည်တို့ကို။ کاروانسراهایی အတွက်ဒီလမ်းကြောင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြသောအခုအကြွင်းအကျန်ငါးဆယ်အရိပ်တည်။
ထိုဗိသုကာ၏အိမ္ဝင္းအတွက်အီရန်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဗိသုကာနှင့်ပတ်သက်နယ်မြေမကြက္၏။ کاروانسراهایی အဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောဆာက္လုပ္ေရးရှိသည်။ ပုဝင်းလမ်းမှမြေပုံလေးကိုကျောက်၊နှစ်ကျောက်ခေတ်၊စသည်တို့ကို။၊ octagonal၊စသည်တို့ကို။ မြို့ပတ်ရထား။၊ အလိုက်နှင့်အမျိုးအစား၏အနောက်ဘက်ကမ်း၊အကွေ့အသုံးပြုသည်။ ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အ caravanserais ကဲ့သို့အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေက်ာင္း၊အများဆုံးအစဉ်လေးသောကျောက်အသုံးအ اتاقهایی ထိုခြံပတ်ပတ်လည်၊အသုံးပြုရန်အတွက်ခရီးသည်တို့၏ဖန်ဆင်းထားသည်။ အချို့ caravanserais မှရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူအုတ်၊ပင္ဘက္ပ၊ႏွင့္ရောမထားပါသည်(ကဲ့သို့အရွတ်၏ပြိုကွဲလုနီးနီး Khorasan၊အီဆန့်ကျင်ဘက် سپنج တော့ဘူးနှင့် mahyar၏Isfahan)။
ဗတ်၏အခြားအထိမ်းသာေရးအီရန်အကြောင်းအမျိုးမျိုးအတွက်မြို့များနှင့်ကျေးရွာများ၏ဆောက်လုပ်ရေး။ ညီတဲ့ဘာသာတရား၊ရိုးရာဓဆး၊င္ငံအကျိုးသက်ရောက်မှုအထူးသဖြင့်အရေးပါ။ အဆိုအရအဆိုပါစာရွက်စာတမ်းများကို၊ရရှိနိုင်သောအာရုံစိုက်ဖို့သန့်ရှင်းမှုနှင့်စင်ကြယ်သောအတွက်အီရန်၊မြေယာများရှေးကာလ၊မီကပင် Zoroaster၊အ hypocrites။ ဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့လူ့အဝတ်လျှော်နှင့်တိုက္ဖ်က္ေ၊စသည်တို့ကို။၊ ထိုသို့အားဖြင့်ဆောက်လုပ်အဗတ်မြို့။ ညီဖို့စာရွက်စာတမ်းများ၊အကျဉ်းချုပ်၊အပါအဝင်စောဗတ်၊စသည်တို့ကို။ အရေပြားပေါ်၌persepolis အ Achaemenid ကာလ၊နှင့်အရေပြားပေါ်မှာ၊နန်းတော်၌အမတ္မြန္အ Parthian ကာလ။
ပြီးနောက်ကိုထွန်း၏။ သန့်ရှင်းမှု-အထူးသဖြင့်တင္စားနှင့်များပြားလှသော ablution အဘို့ဆုတောင်း၊ငါး၏နေ့စဉ်အသက်တာ၏အလြန္၊အထူးအရေးပါခဲ့သောအချက်မှနှုတ်ကပတ်တော်ကို၏ပရောဖက်:"النظافه ပါသူ၏"ဆောင်ပုဒ်အတိုင်းမြတ္စ။
အမြို့မြို့အစြန္းဗတ်အတွက်ဖြတ်၏အဓိကမြို့၊အမဲသားဈေးကွက်၊နှင့်ဂျူးပြည်နယ်၊အောင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အတွက်ရေပေးဝေရေး၊သန့်ရှင်းရေးနှင့်ထွက်ပေါက်အချုပ်ပြဿနာအနှော။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပြီးနောက်ဗတ်မႈနှင့်ကျောင်းများ၏တဦးတည်းအရေးကြီးဆုံးမြို့ပြ sprawl စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
အဓိကအာကာသ၏အသီးအသီးရေချိုး၊အပါအဝင် binet၊စသည်တို့ကို။ အကြားအတွက်မီးဖို။ ဒီလမ်းအသီးအသီးနေရာထက္အားဖြင့်စင်္ကြံနှင့်အပြင်တွင်ရှိသောက၏အအာကာသ၊အခြားအ detachment တက်ခဲ့၊အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆများ၏အသီးအသီးအာကာသမှဆွေမျိုးအကပ်လျက်နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အခင်း၊ဗတ်၏ကျင်ကျောက်နှင့်အခြားကျောက်တုံး၊။။။တာ္ရွိေ၊နှင့်အတူကျောက်ခေတ်ႏွင့္အလှဆင်ခဲ့သည်။ အပါအဝင်အဆင်အတြင္းဗတ် آهکبری များအတွက်ရိုးရှင်းသောအရောင်"(ဥပမာ၊گنجعلیخان၊Kerman၊အသစ်ပစ္စည်းများအလယ်တန်းနှင့် khosro ဝိတ္က်ေ၊Isfahan)။
စအိမ္ရာလူ့အမြဲတမ်းအတူ၊ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ရေးရန်သူများနှင့်အ castleand အပိုဒ်၏သိသာအန္းကာကွယ်ရေးလူ့ဖြစ်ကြောင်း။
ယေဘုယျအားဖြင့်၊အ castleand ခွဲနှစ်ခုကအဓိကအုပ်စုအဖြစ်အောက်တွင်:နံပါတ်အလိုက်၊သူကလြင္ျ။ အဖြစ်အတွက်နိဒါန်း၏palaces၊ဒါကြောင့်ပြောပါတယ်၊အဆောက်အအုံဖြစ်မည်အသုံးပြုသည်။ ရဲတိုက်၏အစအချိန်မီထုံးစံ၌အအေးဆေးတည်ငြိမ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်အိမ်တော်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤရွင္းလင္းခ်က္၏persepolis၊၎င်း၏ဒီဇိုင်း၊စသည်တို့ကို။ ဖြစ်နိုင်ရဲတိုက်"။ အစကနေအကျွန်းစုတွင် takab၊အနောက်ဘိုင္ဂ်န္-၏သန့်ရှင်းရာဌာန၊ထားပါတယ်-တစ်ခါတစ်ရံတွင်အဖြစ်ရည်ညွှန်း نیایشگاه နှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပြီး။
အကြီးဆုံးနှင့်အ مستحکمترین قلعههایی တဲ့အတွက်အီရန်တည်ဆောက်ခဲ့ကြ၊စသည်တို့ကို။၊ ပိုင်အဂိုဏ်း၏အ ismailis။ ဒီ castleand အတွက်အမြင့်ဆုံးနှုန်းအက္ခ်က္ခဲ့ကြစု(ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်တည်း။ لمبسر၊စသည်တို့ကို။ گردکوه။၊ အ saro နှင့်အ hump)။
၏ဗိသုကာဒီ castleand ရှုထောင့်များ၏ကာကွယ်ရေးနှင့်စစ်ဘက်၊အစီအစဉ်ရှိပြီးသူတို့၏အင်္ဂါရပ်ကွဲပြား။ Castleand အတွက် العبورترین မြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခဲ့ကြပြီးဒီဇိုင်းနှင့်အခန်းကဏ္ဍများ။ အဆိုပါဒီဇိုင်နာသို့မဟုတ်ဗိသုကာ၊ခြံစည်းရိုး၊စသည်တို့ကို။ အမည်၊စသည်တို့ကို။ အဆိုပါအခန်းပေါင်းနှင့်အသွင်းမှရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူအလုပ္အကိုင္သဘာဝကျောက်တုံး၊ပစ်လွှတ်သူ။ ပီးဒီ၊မကြာခဏသူတောင်ရှိပါတယ်တြီဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ကြသည်မဟုတ်။ အဆောက်အဦပစ္စည်းများ castleand ပိုပြီးပဲ့နှင့်အုတ်နှင့်မျက်နှာပြင်၊ဘိလပ်မြေနှင့်ထုံး။
قلعههایی တဲ့အတွက်လွင်ပြင်ေمحافضت၏ခရီးသို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်အတွက်အစစ်သားပေါ်သို့၍အဓိကတြီဒီဇိုင်းများသတ်မှတ်ထားခဲ့ကြ၊နှင့်မြေပုံရှိ၏စတုရန္း၊စတုဂံ၊စက်ဝန်း၊နား၊ရထား။ ဒီ castleand ပီးအဆိုပါမျှော်စင်နှင့်အ barrow ခဲ့ကြ၊နှင့်အဆောက်အဦပစ္စည်းများ၊သူတို့သည်လည်းအများ၏အုတ်နှင့်ရွှံ့ကြီး(တူတပ်၊DayZ၊အောက်တိုဘာ။ ကြား Galle၊Gorgan၊အီ قوشچی ဒြေနှင့်ရဲတိုက်အစားခပ်နွမ်းနွမ်း၊kermanshah၊အီ)။
အတွက်ဆယ်ရာစု(ဖန်တီးမှုရှိသောရထားမှနည်းလမ်းအဟောင်းဆိုင်းခြင်း၊အမျိုးသားရေးနှင့် سربازخانههایی ဖို့နည်းလမ်းအသစ်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်အတွက်အနောက်ဘက်ကမ်း၊မာ قلعههایی နှင့်အတူစတိုင်အနောက်တိုင်းဗိသုကာတည်ဆောက်ခဲ့သည်(အရေအ hormoz။ khārk၊စသည်တို့ကို။ qeshm နှင့် بندر)။
၏အနေအထားရာသီဥတုဒေသကိုအီရန်ကြီးမားတဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်တီထွင်မှု၏အသွင်အပြင်ဤပြည်၏အရောင်ခွဲခြား။ အရက်၏ရှေးဟောင်းအတွက်ဘေးထွက်စီမံကိန်း၊အဓိကရေပေးဝေရေးကဲ့သို့သောအဖြစ်ဖန်တီးမြေနှင့်အဆောက်အဆည်၊သိုလှောင်ရေများ၏ဆောင်းတွင်းအယူ၌သီ کمآب နှင့်ခြောက်နှစ်လည်းမှုကြောင့်အမြို့"ရေစတော့ရှယ်ယာ"တူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်သို့ကျောင်း။ အစောဆုံးနမူနာမှအကြွင်းအကျန်များ၊စသည်တို့ကို။ အရင်းအမြစ်၏ရေသိုလှောင်ဗိမာန်တော်တွင်တည်ရှိပြီးပြည်နယ်၏အ Achaemenid ကာလ။
ရေ storages အုပ်စုနှစ်စု၊အထွေထွေအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကသို့ခွဲခြားထားပါသည်။ ၏စည်းကမ်းချက်များ၌၊အရေ၊အဆိုပါရုံးတြင္အရံရေပေးဝေရေး၊လွှမ်းခြုံအရင်းအမြစ်၊စသည်တို့ကို။ ဝေါဟာရနှင့်ဓာတ္ခြဲခန္း၊စသည်တို့ကို။၊ လှေ၊စသည်တို့ကို။ پاشیر တယ်ဆိုတာ၊polyresin၊ထိုအခြင်းအတွက်ကွဲပြားသောပုံစံမျိုး၊cubical၊စတုဂံ၊စသည်တို့ကို။ cylindrical နှင့်ပုံထားကြပါတယ်။
ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊သူတို့ကျောက်အုတ်၊شفته၊ထုံးနှင့်ဘိလပ်။ အရေအတွက်အဲဒီရေမြေအောက်ခန်းနှင့်အတူအုတ်နှင့်အုတ်ကြွပ်မွမ်းနေကြသည်(ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ရေ caches qazvin၊၊ဆား၊semnan နှင့်ငါးဝေါဟာရ یزد)။
ပြီးနောက်အစ္စလာမ်၊တိုးချဲ့မြို့ကိုအစ္စလာမ့်နှင့်အတိုး၏လူမှုဆက်သွယ်ရေး။ အဆိုနည်းလမ်းအတြဲ၊ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်၊caravanserais နှင့်ဖလှယ်၊အဆိုပါစီးပွားရေးအကျင့်သီလ၏ပုံသဏ္ဌာန်အာကာသ၊ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများ၊မှလူသိများသည်။ အမြို့မြို့အစြန္း၊အဓိကအရိုးများနှင့်စီးပွားရေး၏ဗဟိုစီးတီးခဲ့ပြီးကျီ။။။စင်တာများ၊ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊စသည်တို့ကို။ အဆိုပါစင်တာများ၏ကုန်စည်၊နှင့်ငွေကြေး။
ဈေးကွက်အတွက်ပိုပြီးတလျှောက်အများဆုံးအဓိကလမ်းကြောင်းများ၊မြို့ထဲတွင်အကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်၊အများဆုံးကိစ္စများတွင်၊အ sirloin ဈေးကွက် thoroughfare၊အဓိကမြို့တော်လည်းဖြစ်အရေးအပါဆုံးနှင့်အများဆုံးကိုအစြဲ၊နိကတူဈေးကွက်အဘွား၎င်း၏လက်ရှိအမည်ကို။၊ အဆိုပါ အ Isfahan နှင့် ဈေးကွက်အရေအရင်းအမြစ်များစီမံခန့်ခွဲမှု)။ အများစုအတွက်အမြို့မြို့အစြန္းေ ဂုဏ္ေ လာမယ့်ဈေးကွက်အတွင်းမှတည်ရှိပြီးခဲ့သည်။
စိတ္၏နှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်အ sirloin၏အဓိကနှင့် راستههای ခွဲ၊အသီးသီး။ အချို့ راستهها ထောက်ပံ့ဖို့ကုန်ပစ္စည်းများအထူး။။။ထိုသို့သောအဖြစ်ဈေးကွက် بزازها စသည်တို့ကို။ کفاشها။၊ ခွဲစိတ်ကုသနှင့်အနီးတဝိုက်။ အိမ္ဝင္းမြို့ပြအတွင်းစိတ်-ယခင်ကဆွေးနွေး-မကြာခဏ၏နောက်ကျောအပေါ် دکانهای ဈေးကွက်တည်ရှိပြီးခဲ့သည်၊နှင့်နည်းလမ်းဖြင့်တံခါးသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့အာကာသကိုဈေးကွက်မှ၊ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အများအပြားအင်းနှစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်၊ခန့်ထား၍၊ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ရှိသည်ဟိုအိမ္ဝင္း။
အတွင်းဈေးကွက်အရွယ်အစား၏သတ်မှတ်ထားသောနှင့်အချို့သောမပြုခဲ့၊အတွက်နှင့်အချိုးအနံမြို့နှင့်သာယာဈေးကွက်၏ကွဲပြားခြားနားသောခဲ့သည်။ အတွင်း၌အိမ်ပြန်နောက်ကျောအသေးစားမြို့နှင့်ပျမ်းမျှများလောက်ရာအနည်းငယ်မီတာအတွက်အမြို့မြို့။ ထက်ပိုပြီးတစ်ကီခဲ့ပြီးဈေးကွက်အတွင်း၊ငါးအကြားတဆယ်မီတာ)။
တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဈေးကွက်မှအကောင်းဆုံးပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများကို၏ဗိသုကာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကော်လံနှင့်မြို့ရိုးထက်ပိုကျောက်ခေတ်နှင့်အုတ်အသုံးပြုခဲ့သည်အဖုံးမျက်နှာကျက်၏အင်္ဂတေနှင့်အုတ်၊သူ။ အဖုံးကိုအနှုတ်ကြီးဖြစ်လေး سوها နှင့် تیمچهها မှအမိုးခုံးနှင့် کاربندی အသုံးပြုခဲ့သည်။ အမိုး၏အဈေးကွက်များ၊ပိုပြီးနှင့်အတူအချိန်တွေမှာဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တွေမှာလည်းအပူလျှပ်ခဲ့ငွဲ။ ကြမ်းပြင်၏အဈေးကွက်များ၊မကြာခဏကီေ၊သောခဲ့သည်၊အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်၊အချိန်တို့၏ကျမ်းပိုဒ်ရိုက်နှင့်ကြံ့ခိုင်ခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊တစ်ခါတစ်ရံတွင်အကျောက်ခေတ်နှင့်အုတ်အဖုံးအလႊာ၏ဈေးကွက်နှင့်အမယ်။
သို့သော်၊အဆိုပါဈေးကွက်၏တဈအရေးအပါဆုံးအထိမ်းအမှတ်၊မြို့၊အကြောင်းပထမဦးဆုံးအရပျ၌အဘို့၊ထောက်ပံ့ရေး၊ထုတ်လုပ်မှု၊လဲလှယ်ခြင်းနှင့်ဝယ်ယူရောင်းချကုန်စည်များကြီးဖွဲ့စည်း၊ဒါပေမယ့်နောက်မှမြောက်မြားစွာသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှု။ တိုးတက်မှုနှင့်စီးပွားရေးသာယာဖို့ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းများအမျိုးမျိုးကိုဈေးကွက်အတွင်းခဲ့သောမှသူတို့ကိုတို့တွင်တွေ့ရှိနိုင်မှဈေး၊cyclical၊စသည်တို့ကို။ ဈေးကွက်များ၊ကျေးလက်နေ၊စသည်တို့ကို။ အဆိုပါဈေးကွက်၏ပုံသေ၊ဈေးကွက်၊လမ်း၊မိႈတယ္။
တိုင်းယိုများအစ္စလာမ့်ခေတ်၊ဘယ်အရာ၏အထိမ်းသည်ဘာသာရေး၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အဂုဏ္ေနှင့်အထက်တန်းကျောင်း၊ဘာသာေရး၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အရိပ်နှင့်နန်းတော်၏အရာက်ယ္၊ဖွဲ့စည်း၊နှင့်တစ်ခါတစ်ရံလည်းနေရာတွေတိုးချဲ့ဖို့အထိမ်းအမှတ်ထည့်သွင်း၊အခြား။ ဥပမာအားဖြင့်၊ပထသို့မဟုတ် Minar သာမႈပြီးအဆိုပါကျောင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းအရှိန်းရှိန်းနှင့်သီးခြားလည်းအသုံးပြုသည်။
အဆိုပါဗိသုကာနှင့် ကျွမ်းကျင်သမား နှင့်အတူ၊အာရုံစိုက်ရန်ရာသီဥတုအခြေအနေများနှင့်ပထဝီကွဲပြားသောဒေသများအတွက်အီရန်နည်းလမ်းများ၏ဗိသုကာတွင်အမျိုးမျိုးသောမြို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအလေး;ဒါကြောင့်အအေး၊ဖန်တီးခြင်းအထိမ်းအမှတ်၊ကင်းမဲ့ میانسرا သာအာဇာဘိုင္ဂ်န္၊အသုံး၊အလုပ်အ deflector လည်းသဲကန္တာရထဲမှာ၊အပျော်၊။
အနှစ်သည်တင်။၊ အဝေါဟာရတစ်ခု၏အရေးကြီးသောအစိတ်အဆောက်အဦး၏တိုင်းဒေသကြီးများတွင်အပူနှင့်ခြောက်သွေ့အတွက်အီ)။ အသီးအသီး deflector ပါဝင်သည်တာဝါတိုင်၊လေထုကျော်အဆောက်အအုံ။ အသီးအသီးရဲ့ထိပ်ါ၊အပေါင်း၏နှုတ်ကိုဒေါင်လိုက်၊အက၊အရိုင်း၏လေတိုက် ouazzane တင်လိုက်ဖမ်းမှလေနှင့်တိုက်ရိုက်အခန်းတစ်ခန်း၊မြေညီထပ်သို့မဟုတ်မြေအောက်ခန်း၊အစိုဓာတ်ကိုမှရေလှောင်ရတဲ့။ ကိုထည့်သွင်းမြို့။
သာတောမြို့ကဲ့သို့သောအဖြစ် Kashan၊یزد နှင့် Kerman အ deflector အတွက်အမျိုးမျိုးသောအထိမ်းအမှတ်ဘယ်လောက်မှနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ အချို့အဆောက်အအုံ၊ပင်အများအပြားဝေါဟာရ(ထိုကဲ့သို့သောရေကဲ့သို့စတော့ရှယ်ယာငါးဝေါဟာရ یزد)။ တစ်နည်းနည်းနဲ့၊အခြားအဝေါဟာရအဖြစ်ပူနွေးနှင့်စိုထိုင်းသောဒေသများကိုနိုင်ငံ၏တောင်ဘက်အသုံးပြုသည်၊နှင့်အကြားခြားနားချက်ကိုအဓိကအကြောင်း بادگیرهای ဒေသများတွင်ပူနွေးခြောက်သွေ့သည်ဝေါဟာရအတွက်စိုစွတ်သောဒေသ၊စနစ်မှတဆင့်အစဥ္တြင္လေ၏။ ဆိုလိုသောအခြားဖြတ်တောက် بادگیرهای ဧရိယာပူနွေးခြောက်သွေ့၏အောက်ဆုံးတွင်ဝေါဟာရကိုကင်းမဲ့။ ဒီအတွက်ကြောင့်၊၏ဧရိယာတွင်ဆိုက်ရေကိုအသုံးပြုကြောင်း၊ပထမ၊အစိုဓာတ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ဧရိယာများ၊တင်ဆက်မှုတည်ဆောက်၊နှင့်ဒုတိယအ၊ဖုန်မှုန့်၊နှင့်ဖုန်မှုန့်နှင့်အတူလေထုထဲသို့ဝင်ရောက်သွား။၊ ကီဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသင်္ဘောကျင်းဘက်မှာ။ လျှောက်လွှာ၏အခြားဝေါဟာရအခါဤသည်အဆင်းလေသည်မတည်အဖြစ်၊ခေါင်းတိုင်ပြုမူနှင့်ပူနွေးသောလေထုအတွင်းရှိနေအိမ်ထဲကလမ်းညွှန်ကို။
ပေမယ့်အလွဲသုံးစားမှု၏ကြီးမားသောအသွင်အရေးရှုထောင့်။ ဒါပေမယ့်အသုံးချမှုတွင်၊အကျွမ်းဝင်သာ။ အဆိုပါလမ်းသည်အသစ်အဆန်းကိုယ်တိုင်ကအတွက်ပတ်အတွင်းလေတာဝါတိုင်၊minarets နှင့် پلههایی ကြောင်းမှခေါင်မိုးနှင့်အတွင်းပိုင်းနေရာများ၊ပြင်ပအဆိုအရ پاشیرهای ဂျွမ်းရေ caches ဦးဆောင်မည်မှ၏အရေးပါမှုကိုအထူးလူ။ ဒါ့အပြင်၊လှေ၊စသည်တို့ကို။ အဆိုပါဆက်သွယ်ရေး၏နည်းလမ်းများမှအသုံးဝင်သောအဆိုပါဒုတိယထပ်ရဲ့ခေါင်မိုးသို့မဟုတ်ရောမအင်ပါယာ၊အသွား။ အချို့အဆောက်အဦးလှေကားအတွက်ထို့အပြင်ရန်အပလီကေးရှင်းဆက်သွယ်ရေး;ဆိုလို၏စတိုင်၊စစ္ၾကတာလည္း(ဥပမာ။taybad၊Khorasan)။ ကျောင်း غیاثیه خرگرد ရှိရှစ်ကိရိယာနင်း။ လည်း၊သိမ်း၊تبریز၊အီ پلههایی အတွက်ခြောက်ခုအစိတ်အပိုင်းအစားျလှေကိုအဓိကရှုမြင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ချိတ်ဆက်၊နှင့်လေးဖုန်းအတွက်အ၏အမိုးခုံးသို့မဟုတ်အ nave တည်ရှိပြီးမှဒုတိယထပ္ချိတ်ဆက်။ အဆောက်အဦပစ္စည်းများ၊လှေ၊မကြာခဏအုတ်။
များစွာသော آرامگاهها အခါအဓိကကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ဘာသာရေးသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးအကြောင်းများမှာအောက်မြေပြင်ကြမ်းပြင်၊ဖန်ဆင်းခဲ့ကြ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မြေညီထပ်သင့်အတွက်ဒေသခံ pilgrimages သို့မဟုတ်ဘာသာရေးအခမ်း၊တပ်မတော်၊စသည်တို့ကို။၊ များသောအားဖြင့်ထိုနေရာ၏သင်္ချိုင်း၌stratified၏မျက်နှာပြင်အောက်မြေကြီးသနည်း။ ဆောက်လုပ်ရေး၏အပို آرامگاههای မြောက်ပိုင်းဒေသ၏ဂျန်နှင့်ခေတ်မှီ)။
အဌမရာစုကြော်ငြာကိုလာမည့်တပ်ဆင်ခ enshrine သစ်သားအတွက် مزارها အတွက်သင်္ကေတ။ သစ်သားသေတ္တာ inlaid၏အမည်များပြား درودگران အနုပညာရှင်ရဲ့ကိုယ္ပိုင္ျ။
ယေဘုယျအားဖြင့်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာအတညျဆောကျဖို့ဘယ်လို၊ပုံစံ၊နှင့်အခြားရေးရာများကိုဆောက်လုပ်ရေးကာလနှင့်အစ္စလာမ့်အလွန်နိမ့်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်။ တစ်ဦးသံသယမပါဘဲ၊ဖန်တီး၊အဆောက်အရာကိုစုံဘာသာရေးနှင့်သာေရး၊စသည်တို့ကို။ လိုအပ်သိပၸံကြောင့်တြီသင်္ချာ၊နှင့်ဒီဇိုင်း)နှင့်ကျွမ်းကျင်တဲ့လက်အလယ်ခေတ်အတွင်းအရိပ်အရောင်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏သိပ္ပံ၊သူတို့၏ပြောင်၏အနုပညာအတွက်ဗိသုကာများဖန်တီးရန်။ ကံမကောင်းသဖြင့်၊အများအတွက်သမိုင်းဆိုင်ရာကျမ်း၏အစ္စလာမ့်ခေတ်၊အရေးအကြောင်းအရာနှင့်ရုပ်ပုံများအကြောင်းအများကြီးကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လိုဆောက်မျက်စိမှဟန်။ သာနမူနာဖော်ပြရကျိုးနပ်နှစ်ဦးပန်းချီကားမှစွပ် behzad၊۸۷۲)။ သာ ظفرنامه နှင့် Nizami။ ဤပန်းချီကား၊ယခုမှာတက္ကသိုလ် هابکینز ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်၊နှင့်၊သူတို့ကိုဘယ်လိုဆောက်လုပ်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသော၏Timur၊နှင့်လည်းအဆိုပါနန်းတော် خورنق ဖို့အလွန်သေးသေးလေးပုံ၏ကျွန်။ ဤပန်းချီ၊ပုတီးနှင့်ကိရိယာနှင့်ကိရိယာနှင့်ရိယာ၊ဗိသုကာ၊ခေတ်မှီ၊ကဗျာစသည်တို့ကို။ گونیای၊သစ်သား၊ချိုးဖဲ့၊လိုင်းများ၊ရေမှုတ်များ၊လက်ထရောနစ်၊စသည်တို့ကို။ trowel၊လှေ၊စသည်တို့ကို။၊ ။ နှင့်လည်းဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကျောက်သား၊အုတ်၊အင်္ဂတေ၊စသည်တို့ကို။ အပေါ်ရန်မျက်နှာပြင်၊နှင့်ကြွပ်နှင့်အဆင့်အကောင်အထည်ဖော်အဆောက်အအုံ၏ပြဖို့မြို့။
အချို့သုတေသီတွေကယုံကြည်ကြောင်းအကြောင်းရင်း၏မရှိခြင်းအကြောင်းအရာ၏အကျိုးရှိသောအကြောင်းဗိသုကာအစ္စလာမ့်ခေတ်၊နှင့်နည်းလမ်းများ၏ဒီဇိုင်းနှင့်အဆောက်အဦတို့ကို၊ဒီအကြောင်းဗိသုကာပညာရှင်၊နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်ဗျာ၊။ ဒဿနပညာရှင်နှင့်ပညာရှင်။၊ အဆိုပါလျော့နည်းအာရုံစူးစိုက်မှု)။ သင်တန်း၏၊ဒီအမဲမမှန်ကန်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောကာလလိုအပ်လူတိုင်းမှဗိသုကာနှင့်လက်အဆောက်အဦကိုဖန်တီးရန်အလုပ္အတွက်လူနေအိမ်ရာ၊ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကိုးကွယ်ခွင့်ပြုဖြစ်ပါတယ်)။
ပညာရှင်များ၏အစြန္းကြောင့် بیهقی،ابن خلدون နှင့် khajeh Rashidႏဒင်၊စသည်တို့ကို။ အကြောင်းအရာ၊အဝင်အကြောင်းအသွင်နှင့်ဗိသုဘာ။။။အပါအဝင်အဘယ်အရာကိုဗိသုကာသိပ္ပံ၊သင်္ချာနှင့်ဂျီဩမေတြီအကြောင်းကြားခဲ့အပြီးမှာအဆောက်အအုံများ၊တခြားအကြောင်းဘာမှမခင်၊အဇိုင်းနှင့်မြေပုံစွ။။ Farabi အခေါ်ပညာရှင်အီရန်နှင့်အတူ၊ေျပာဗိသုသိပ္ပံ-အခြေခံ الحیل အ حیل၊ကျွမ်းကျင်မှု၊အနုပညာနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများအကြောင်း၊masterfully နှင့်တင္ဆက္ျတြီပုံစံမျိုးပြသ။ တြီအခြေခံဗိခဲ့ဗိသုကာများ၏အလွန်အမင်းကျွမ်းကျင်ရှင်ဟုအနက်အဓိပ္ပာယ်အ geometer။
ဒါ့အပြင်၊ကျမ်းမှာလက်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုအတြီနှင့်ဒီဇိုင်းများတြီအတွက်ဗိသုကာဆွေးနွေးကြသည်၊နှင့်တစ်လျှောက်လုံးဤစာအုပ်၊အကြောင်းဖော်ပြချက်ဗိလက်တွေ့ဆီလျော်မှု။ ၏အစိတ်အပိုင်းစာအုပ် meftah ရေးခဲ့ jamshid ကွက်များ၊သင်္ချာ၊နှင့်လုပ္ကိုင္သ၏ခေတ် teymoori၊ဗိသုကာ၊ခွဲဝေအတွက်အစိတ်အပိုင်းများ၏နည်းစနစ်ကိုတည်ဆောက်သောကြက်နှင့်အမိုးခုံးနှင့် mogharnas။ အမျိုးမျိုးကနေ طاقهایی ကြောင်းသူဖော်ပြထားတယ်၊အချို့အတွက်အထိမ်းအမှတ်၊Timurid၊တဦးတည်းကိုတွေ့မြင်နိုင်ကြောင်း။
ဗိသုကာ၊ပန်းထိမ်သမား၊စသည်တို့ကို။ بنایان နှင့်အခြားအုပ်စုတက္ကသိုလ်မှသိပ္ပံ၊နှင့်အတူအပြည့်အဝအသိပညာ၏နည်းပညာ၊နှင့်အတူကိုထွင်ဆန်းသစ်မှု၊၎င်းတို့၏တိကျတဲ့နှင့်အပြည့်အဝလေးစားများအတွက်အခြေခံမူ၏တြီနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်အစဉ်အလာအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်မှလှုံ့ဆော်က်ယ်ဝေးမ်မှုများ၊အာကာသ၊ဗိသုကာ၊အီ shokouhi သေလး။
အဆိုပါတာဝန်၏အဆောက်အဦးအစ၏တာဝန်အုပ်စုများအပြား);နိုင်ပါတယ်၊ဥပမာအားဖြင့်၊ထိုအုပ်စုများအတွက်တာဝန်ရှိအဆောက်အဦဖွင့်အဆင့်၊နှင့်ထိုအုပ်စုများအတွက်တာဝန်ရှိအလှဆင်ဆီးေ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်၊Kerman၊စသည်တို့ကို။ ပင္ဘက္ပႏွင့္)။ လည်း၊ကျွမ်းကျင်သောပန်းထိမ်သမား၊စသည်တို့ကို။ ဖွဲ့စည်းထားသော။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်။၊ ဗိသုကာ၊သာ။ အရသိရသည်။ အပေါင်း၊စသည်တို့ကို။ سنگکار။၊ အထွေထွေအများပြည်သူကိုယ်တိုင်ကပါဝင်သည်။ کاشیکار နဲ့ရိုးရိုးအလုပ်သမားအသီးအသီးအချို့တာဝန်များ။
အဆိုပါအုတ်၏အဓိကအဆောက်အဦပစ္စည်းများအတွက်မီနှင့်အပြီးအစ္စလာမ်)။ အုတ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်ဗိသုကာများ၏ယေဘုယျအားဖြင့်စတုရန်းသောအသွင်သဏ္ဌာန်၌ကိုက်၊အုတ်-ကုန်ထုတ်လုပ်မှုယူနစ်အတွက်အားလုံးအီရန်အပေါ်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အုတ်ထို့အပြင်သုံးစွဲဖို့တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ခန္ဓာကိုယ်အဆိုအလှဆင်၊ဒါကြောင့်လည်းပြဇာတ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှတွေ့နေအစ္စလာမ်အထိကာလအ Timurid လွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊အပိုအဆောက်အအုံ၊Kerman။ အစကနေအုတ် تراشدار နှင့်ပုံစံကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ အုတ်ဖုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အဆင်းများကြောင့်အရောင်ဖျော့အဝါရောင်၊အနီရောင်နှင့်မှောင်မိုက်ကိုအနီရောင်ရှိပြီးမျက်နှာစာ ۳*۲۰*۲۰،۵*۲۰*۲۰،۵*۲۵*۲۵ စင်စေခဲ့ကြသည်အလုပ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများ၏အဆောက်အဦထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် verandas၊စသည်တို့ကို။ طاقنماها။၊ အခုံး၊စသည်တို့ကို။ karun ခန်းကိုလုပ်ငန်း(တာဝါတိုင်၊အပိုင်၊စသည်တို့ကို။ အမိုးခုံး၏qabus၊စသည်တို့ကို။ အပထအအ၏saveh)။
တေခြားဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊အကြောင်းမှာအားလုံးအသက်အရွယ်အတွက်၊ဗိသုကာ၊ကိုအသုံးပြုသည်။ ကတည်းကအ gypsum ကနေအဆောက်အဦးပစ္စည်းများဈေးနှုန်းဈေးပေါများအစောပိုင်းအတောင့်တင်းသည်။ မြောက်မြားစွာသောအသုံးချခဲ့ကြ၏အက်ိဳးဗိသုကာ)။ အဘို့အအိပ် garnishing အတြင္းမ်က္ႏွာၿပင္မ်ားအဆောက်အအုံများ၊စာရေးများ၊ကျောက်များ၊စသည်တို့ကို။ မွမ်း محرابها၊ခုံးနှင့် verandas၊အလုပ် میرفتهاست။ အများအပြားအထိမ်းအမှတ်၊ရွေးကာလ၊ရှေးဘိုးဘေးနှင့်အတူပင္ဘက္ပလွဆင္ပစၥည္းမ်ား)။ ၏အရေးပါမှုကိုပင္ဘက္ပအပေါ်အထိမ်းအမှတ်အစ္စလာမ့်အောင်အနုပညာရှင်အတွက်ဤနယ်ပယ်မှ"جصاص"ကြကျော်ကြား ونام ဤအများအပြားအနုပညာရှင်တွေအတွက်ကျောက်များ၏အဆောက်အစွယ်)။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊အဆိုတော် گچبر အတွက်ပဉ္စမမြောက်ရာစုနှစ်အထိေဒသအ hegira၏နည်းလမ်းများအကွဲပြားမှုတူပင္ဘက္ပရောင်၊گچکاری وصلهای၊စသည်တို့ကို။ گچکاری ရဲရင့်ခြင်းနှင့်ခေါင်းပေါက်၊စသည်တို့ကို။ molded ကင်နှင့် molded၊အပြားကိုပေါ်လွင်အသုံးပြုပြီ။(ဥပမာ-Isfahan:-mihrab၏uljeitu၊စသည်တို့ကို။၊ နစ္စတန်၊အီရန်:မိုးဘွား၎င်း၏လက်ရှိအမည်၊စသည်တို့ကို။၊ hamadan၊အီရန်:အမိုးခုံး၏အ alevis နှင့် اشترجان:ပလ္လင် اشترجان)။
နမူနာ کاشیکاریهای jame၏Isfahan
၏အသုံးပြုမှုကိုအုပ်ကြွပ်များအတွက်အလှဆင်နှင့်လည်းတင်းမာအဆောက်အအုံမှအရွေးခံကာလအစနှင့်အလယ်ခေတ်အတွင်းအပေါ်ဆုံး၊အထူးသဖြင့်အ Timurid နှင့် Safavid အထွတ်အထိပ်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကြွေပြားအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍအလှဆင်အထိမ်းအတွက်အစ္စလာမ့်ခေတ်၊နှင့်သင်ရုံများမှာနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်အနုပညာရှင် کاشیکار အဘို့အလုပ်ကိုင်ဖို့တိုယိုတာ။ ၏အသုံးပြုမှုကိုကြွေပြား၏အရောင်အကွက်များ၏ခုနစ်ပါးအရောင်အဆင်း၊ကြွေပြား၏၊နှင့်ကုမ္ပဏီ၏အုတ်နှင့်အုတ်ကြွပ်အတွက်ကာလအရွေးခံ၊စသည်တို့ကို။ ဂိုဏ်းနှင့်အ Timurid နှင့် Safavid အတွက်အလှဆင်အဆောက်အဦး၏ခဲ့သည်အသုံးပြီးအပြင်၊အဆက်တြက္က။ အလှဆင်၏အမျိုးမျိုးသောအဆောက်အဦ၊အဖုံး၊အမိုးခုံး၊ပထယူမှတက်၏အတွင်းမျက်နှာပြင်စိုက်ထူနှင့်အောက်အမိုးခုံးနှင့်အရိုးနှင့်အဘို့ယဇ်ပလ္လင်များနှင့်အတူကြွေပြား။ အထူးသဖြင့်ကွက်၊၏၊အထိမ်းအမှတ်၊ဘာသာရေးနှင့်သာေရးအီရန်အစ္စလာမ့်ခေတ်တိကျတဲ့အလှသည်သက်ညှာ(ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် gonabad:အမတ္၏gonabad နှင့် غیاثیه၊စသည်တို့ကို။ خرگرد:ကျောင်း خرگرد၊مشهد:အမွားမ်ားတဲ့ကျောက်မျက်၊စသည်တို့ကို။၊ تبریز:အပြာရောင်မာင္ရယ္၊Isfahan:မတ္၏Shaykh lutfu 'llah နှင့်အင္ငံဂုဏ္ေ)။ ခေတ်သစ်ကာလ၌၊စ၊သခင်၊ အလီ၊ဖော၊အလောင်း အများဆုံးအဆင်းလှသောအစ်မအကျင့်ကိုကျင့်၊ tiling ၊အစဉ်အလာအပြေး။
တွင်အစ္စလာမ့်ဗိသုကာ၊နေကျောက်ခဲ၊အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်၊စသည်တို့ကို။ ခန္ဓာကိုယ်၊ဇော၊အခင်းနှင့်အလှဆင်အဆောက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သော်လည်းကြောင့်ပထဝီတည်နေရာနှင့်ရာသီဥတု၊အသုံးပြုမှုများ၏အချို့အစိတ်အပိုင်းများကြောင့်၊အဇာဘိုင္ဂ်န္ဖို့ပိုမြင်နိုင်ပါသည်၊သို့သော်အားသာချက်ယူမှနီးပါးအားလုံးအီရန်အပေါ်၊သမားရိုးကျ)။ အသုံးပြုမှုများ၏အပြီးတွင်အဆောက်အအုံနှင့်မြို့ရိုးသည်အရေးပါခဲ့သည်ဆောက်လုပ်ဖို့ကျောက်၊ကျောက်မျက်၊ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်၊ကျောက်၊ထုံးကျောက်၊စကျင်ကျောက်-ကဂရုတစိုက်ရိတ်၊တခါတရံအ carvings အလုပ်ကြီး(marand:ဆန့်ကျင်ဘက် marand၊Shiraz:မာင္ရယ္၊စသည်တို့ကို။ သာ Kashan:ကမ္ပည်းကျောက်စာ၏အမွားမ်ားစတုရန်း)။
အသုံးပြုမှုများ၏သစ်သားအဆောက်အအုံများ၊ဝင်းဒိုး၊သေတ္တာ၊စသည်တို့ကို။ ကော်လံနှင့်အတန်းအမိုးနှင့်လေးသစ်သား၊အဆိုပါ၏အင်္ဂါရပ်များအစ္စလာမ့်ဗိသုကာအတွက်အဆိုပါဧရိယာ၏Mazandaran နှင့် Gilan၊ပျော်၊ပိုပြီး၊တကမ္ဘာလုံး။ သစ်ပင်၊Tabrizi၊စသည်တို့ကို။ ပိုး၊စသည်တို့ကို။ ဖန်း၊စသည်တို့ကို။၊ ထင်းရှူးပင်၊သစ်ချ၊အပါအဝင် درختهایی ရှိကြ၏၊သူတို့အဘို့အအမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းအညီအသုံးပြုခဲ့သည်၊(varamin ဂုဏ္ေ مامع၊စသည်တို့ကို။၊ تبریز၊အီ arg-အီး-alishah၊စသည်တို့ကို။၊ Sari၊အီၾကမ္းခုနှစ်ဇင်)။
Archeological ပြင်ဆင်မှုမကြာသေးမီနှစ်များတွင်လည်းအဆောက်ကျန်ရှိနေတဲ့ကာလအစြန္းကြောင်းပြသဖန်ခွက်ကို colorfull၊အရောင်အဆင်း။ အပြာရောင်၊ခရမ်းနှင့်အစိမ်းသေချာစေရန်အလင်းရောင်နှင့်အလှဆင်၏ပေါက်နှင့်ပျဉ်ပြား၊မိုးအိမ္၊အခန်းတည်ဆောက်သည်လုံးဝအသုံးပြုခဲ့ပြီး။ လည်း၊လေ့လာမှုသမိုင်းကျမ်းများ၊နှင့်ကြည့်ရှု مینیاتورهای အဌမရာစုမှဆယ် Hijri ပြသသောဖန်ခွက်၊စသည်တို့ကို။ ကျယ်ပြန့်တဲ့နေရာမှာအသုံးတကမ္ဘာလုံး(خرگرد:غیاثیه။၊ ရှင်ဘုရင်ပိုပြီးဒုက္ခ:၏သင်္ချိုင်းဂူဂယ် بکا ဘုရား၊Isfahan:عالی قاپو)။
ဖန်တီးမှုနှင့်အတူအသစ်နည်းပညာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနယူးဝိရောဓိအတွက်ဗိသုကာပုံစံနှင့်အဆောက်အဦများကုန်သောအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၏ထိုကဲ့သို့သောဗိသုကာအဆောက်အအုံသစ်၏ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရအတွက်ဆောက်လုပ်ရေး။ လောလောဆယ်၊မော်ဒယ်အချက်အလက်အဆောက်အဦအဖြစ်အသစ်တစ်ခုချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်အနက် parametric၏လက္ခဏာများ၊အဆောက်အအုံအတွက်မျှော်လင့်ချက်အလုပ်သမားဤအမျိုးအစား၌ထိုအဆောက်အဦး၏အတန်းလျော့ချခြင်း၏စိန်ခေါ်မှုများကိုဒီဇိုင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်သက်ရှင်သောကြောင့်)။ကိုးကား အမှား - The opening <ref> tag is malformed or hasabad name
Wikimedia Commons တွင် Islamic architecture နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
Halen တွန်း။ အစ္စလာမ့်ဗိသု။ ۱۳۷۷။ ဘာသာျပန္ခ်က္၏iraj ဂုဏ္ေ။
လက်။ နိုင္ပါသည္။ مارتن။ Henri။ Stylistic ဗိအစ္စလာမ့်မြေများ။ ۱۳۷۵။ ဘာသာျပန္ခ်က္ Parviz ورجاوند။
Abdullahi Y. , Embi M. R. B (2015). Of Abstract Vegetal Ornaments On Islamic Architecture. International Journal of Architectural Research: Archnet-IJAR။
Yahya Abdullahi, Mohamed Rashid Bin Embi (2013). of Islamic geometric patterns. Frontiers of Architectural Research: Elsevier။
ဟီ ایمیجز(Tehranimages)။ ကျော်ဓာတ်ပုံများခေတ်ပြိုင်အလေးပေးနှင့်အတူပေါ်အသွင်အပြင်ပုဂ္ဂလိကအဟောင်းဟီ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အစ္စလာမ့်ဗိသုကာ&oldid=441885" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၆:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။